Shirkada Apple Oo Mar Kale Jabisay Rikoodhka Iibka Qalabka Elegtarooniga Ah Ee Dunida | Hawraar
Shirkada Apple Oo Mar Kale Jabisay Rikoodhka Iibka Qalabka Elegtarooniga Ah Ee Dunida
Shirkada qalabka Elegtarooniga ah farsamaysa ee Apple Oo laga leeyahay dalka Maraykanka, ayaa la sheegay inay jabisay Rikoodhka iibsiga alaabta elegtarooniga ee dunida, waxaana qiyaasta lagu cabiro sida shirkadaha dunida wax looga iibsado ee sadex bilood laha ah ay shirkadaasi ka gashay, kaalinta ugu horaysya, sanadkii labaad.
Sida qiyaasta sanadkii hore ee sadex biloodka shirkadaasi ahayd waxa laga iibsaday Qalab dhan sadex milyan oo isugu jira aaladaha kala duwan ee ay soo saarto sida ay iPad iyo iPhone, halka sanadkan 2014-ka tiradaas ay kor u kacday, qiyaas ahaana ay gaadhayso ilaa sadex milyan iyo badh.
Shirkada Apple ayaa la sheegay in sadexdii bilood ee aynu ka soo gudubnay sanadkan oo kaliya laga iibsaday, telefoono iPhone iyo aaladaha iPad-ka oo ilaa 1, 47-milyon oo xabbo gaadhayso tiradoodu.
Sida warbixin laga diyaariyay qalabka Apple iibisay sadex biloodka lagu qiyaasay, waxa uga soo hoyday, lacag dhan todoba iyo afartan milyan oo dollar, waxaanay taasi ka dhigaysa in shirkadani kaalinta ugu horaysa ka gashay iibka wax soo saarka ee shirkadaha dundia.
Meelaha ugu badan iyo suuqyada lacagta ugu balaadhani ka soo gashay shirkada Maraykanka ah, ee Apple ayaa ahaa suuqyada dalka Shiinaha waxaanay rejaynaysaa shirkadu in dayrta soo socota ay mar kale suuqyadu u noqdaan kuwo u furan oo si ka balaadhan wakhti xaadirka wax looga iibsado.
Shirkada ayaa macaamiisheeda u balan qaaday raali galin balaadhan, soo dhawayn diiran iyo waliba qalab tayo ahaan sareeya kana qiimo jaban kii hore dhinac kastana ka wanaagsan in ay mar kasta soo saari doonto, kana haqab tiri doonto.